(XASAASI)-Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida ee Dowladda Puntland Oo Xukuntay 43 Alshabaab ah.
June 18, 2016 - Written by Kulmiye
Maxkamadda derejada kowaad ee ciidanka qalabka sida ee dowladda Puntland ayaa xukun dil ah ku ridey 43 katirsan dhagar qabayaashii Alshabaab ee lagu qabtay dagaalkii kadhacay gobolada Mudug, Nugaal iyo Karkaar oo ay kusoo qaldameen.
Cabdullaahi Xirsi Cilmi, oo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ayaa sheegay in dhammaan ragaani ay yihiin kuwa qangaar ah qirtayna inay duulaan ku ahaayeen Puntland kana dambeeyeen dhaawac 72 askari iyo dhimashada 24 kale oo reer Puntland ah.
Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in markii hore maxaabiistaani ay ahaayeen 45 laakiin labo kamid ah maxkamadu ay reebtay kiiskooda maadaama ay da’ahaan ka yaryihiin sidii horay loogu sheegay baaritaana lagu ahayo.
Dhanka kalena xeer ilaaliyaha ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in dhammaan dadka la xukumay loo qabtay qareeno difaaca, ayna qabsadeen mudo hal bil oo rafcaan ah.
Hoos ka dhagayso Waraysiga Xeer ilaaliyaha.